Ukwethulwa kwe-Cryptocurrency yokuqala yase-Italy
I-TrovaWeb ibamba iqhaza ekwethulweni kwe-Cryptocurrency yokuqala yase-Italy
I-TrovaWeb yamukela imali yokuqala yase-Italy ezokhulisa amandla okuthenga
Noma ngubani ojwayelene ne cryptocurrency, uyihlobanisa masinyane Bitcoin, abadumile cryptocurrency ukuthi namuhla kufanele imali. Le phrojekthi I-Winci, kuthuthukiswa ngu awr, e wajoyina kulo ITrovaweb, ihlose ukuphinda le mpumelelo futhi izokwethula ngokusemthethweni okwangempela ngo-Okthoba 19 I-Italian cryptocurrency.
Ukwethulwa okusha I-Italian cryptocurrency kuzokwenzeka ngomshini ohlinzeka ngemigomo yekhadinali izindinganiso zokuziphatha kubalulekile ukuthi kuqinisekiswe ubuhle bephrojekthi. Phakathi kwalokhu: ukubamba iqhaza mahhala yawo wonke amalungu nokwamukelwa mahhala.
Kepha kuyini Winci? Kungowokuqala umlingani yephrojekthi I-AWR, inhlangano ye Ukwabelana Ngomnotho okuhlose ukudala amathuba okukhula nentuthuko. Njenge? Okokuqala, ngokwethula okokuqala cryptocurrency Italiana enzelwe umuntu nomuntu futhi amasekethe Ibhizinisi futhi yakhelwe ukunika amathuba amaningi izaphulelo nokuphromotha.
Uhlelo lulula kakhulu: noma ngubani osayinayo uthola isipho 20 nokubonga eba, ngasikhathi sinye Ambassador. le Ambassador bona banika i izikweletu kubo bonke abanentshisekelo yokuba yingxenye yalomsebenzi. Abantu ababhalisela bonke bayamukela Amakhredithi angama-20. I Abathengisi, esikhundleni salokho, baphola 100, ekubeni Merchant. I Merchant bangosomabhizinisi be amabhizinisi ezentengiso, ngubani ongasebenzisa la makhredithi ukwenza kusebenze izaphulelo nokukhushulwa kumakhasimende abo. Eqinisweni, ibhonasi di 100 nokubonga etholwe ngumthengisi ngamunye ingabiwa kabusha kumakhasimende ayo ngendlela yesaphulelo. Kuyinto yangempela uhlelo di ukugcinwa inqubo izikweletu mahhala njalo. Futhi inani lesaphulelo liyisungula njalo Umthengisi.
Njengoba sekuvele ngamaqoqo wephuzu ahlose ukuthola izipho, ikhasimende elifanayo lingazikhetha noma lizisebenzise ngokushesha lezo izikweletu at amabhizinisi ezentengiso amalungu e Winci isifunda, noma ukuwaqongelela. Ukuqamba okubalulekile kwethulwa yiphrojekthi kungenzeka ukuthi kuguqulwe izikweletu in Ithokheni leWinci, okokuqala I-Italian cryptocurrency kungekudala okuzosakazeka emhlabeni wonke.
Yini eyenza uhlelo Winci ezintsha ikakhulukazi, ukuthi i izikweletu kuguqulwe ku cryptocurrency alalela umshini mahhala njalo futhi kuvezwe yisimiso se ukubamba iqhaza mahhala ngelungu ngalinye. THE izikweletu empeleni banenani eliqondana ngqo namandla abo wokujikeleza. Kufakwe kumqondo oqondile wezomnotho, inani le Ithokheni leWinci ukusakazwa kwazo kuyokhuphuka kakhulu. Inani le Ithokheni leWinci empeleni kusekelwe kwifomula yezibalo ebheka ukushintshaniswa kwangempela.
Kumahhala kunengqondo yezomnotho eziqagelayo, inani le I-Italian cryptocurrency Winci izokhula ngokukhula kwamalungu wesifunda. Ngalesi sizathu, izinzuzo ukuthi i Abathengisi ababambeleli abanakubalwa. Okokuqala, imelela uhlelo olusebenza kakhulu lwe ukwethembeka kwamakhasimende.
Ngaphezu kwalokho, kusukela i Merchant futhi amakhasimende abe yingxenye eyodwa umphakathi ngemuva kokunika abanye abantu engibajwayele abayi-6 i izikweletu, bobabili bathola ilungelo lokuthola amaphesenti izikweletu eqenjini elizozalwa. Ukuziphatha okuhle kwalolu hlobo ukwabelana umnotho ilawulwa ngokuqinile izindinganiso zokuziphatha. Inhlonipho kanye sobala phakathi Ambassador, Merchant e amakhasimende zithathwa njengezinto ezibalulekile ngaphandle kohlelo ezingeke zisebenze kuzo. Kusukela inhloso ye awr nomlingani Winci ukwethula inguquko yokuqala emakethe I-Italian cryptocurrency, bazimisele ukuhlobanisa amagugu nezinhloso ezithile abazazisa ngazo. Ngomqondo, bacindezela ababambeleli ukukhulisa e ukuthembeka la umphakathi ngezindlela ezibonakala obala ngaso sonke isikhathi futhi ngaphandle kwesidingo sokwenza izithembiso zokuhola kalula kuma-Euro. Izinkampani ezijoyina i iphrojekthi abayikhokhi imali. ke uhlelo di ukugcinwa sizosebenzisa izikweletu, abathengisi abangaguqula kuphela ibe yithuba lokuthenga ukukhiqiza e nezinsizakalo. Uma kwenzeka kuba Ambassia, esikhundleni salokho, i izikweletu ingaguqulelwa Ithokheni leWinci, futhi kuzoba okufanayo Ambassador ukunquma ukuthi uzoziphelisa nini futhi niniukushintshanisa ezinikezelwe kunani lemakethe.
ITrovaweb Ukwabelana ngamagugu, izinhloso, ukuthunywa kanye nokubona amandla iphrojekthi, inqume ukujoyina futhi ixhase lolu hlelo. Ngenxa yalesi sizathu, wanquma ukubandakanya kulento yokuqala izinkampani ezingaphezu kuka-4000 asebenzisana ngalo nalapho aqonda khona ukuthi intshisekelo evamile kumikhakha emisha yeumnotho kanye ne ama-cryptocurrencies. La I-Winci cryptocurrency ngakho-ke kuzokwamukelwa njenge Ithokheni Shintshanisa ukuze usebenzise ngokunenzuzo izaphulelo nokuphromotha kuwo wonke umjikelezo I-TrovaWeb.
Tags: imibuthano yezentengiselwano I-Italian cryptocurrency ukwethembeka kwamakhasimende uhlelo lokuthembeka